Carmal baan ahay cidina i guursan mayso | Berberanews.com
Home Qubanaha Carmal baan ahay cidina i guursan mayso
Carmal baan ahay cidina i guursan mayso
Minreet Kaur, markii ay jirtay 27 sano ayay waxay guursatay nin ay isku barteen macbadka Sikh ee kuyaal Galbeedka London.
Guurkaas kuma aanay baraarin, sanad gudihiisna waxay dib ugu soo laabatay gurigii waalidkeed.
Muddo 10 sano ah ayay ku rajo waynayd in ay calfanayso nin kale, hase ahaatee waxay gaartay gunaanad aan wanaagsanayn: oo ah in Ragga haysta madhabta Sikh aanay guursan dumarka carmalka ah.
“Haddii aan ku furo, dib dambe u guursan maysid,” ayuu igu canaanan jiray saygaygii intii aanan kala tagin kahor. Waxaan moodi jiray in uu igu dhibaataynayo, balse waxa uu ogaa in arrintaasi ay dhab tahay. Waana taas midda aan markii dambe ogaaday.
Furriinka ayaa ceeb wayn ka ah Bulshada Sikh dhexdeeda, gaar ahaan haweenka.
Bilowgii hore waan isku xishoon jiray. Waxaan dareemi jiray inaan ahay qof lasoo icticmaalay. Sidee nin kale u doon dooni karaa haddiiba ragii ii arkaan badeeco lasoo isticmaalay?
Ayeyday oo London daggan ayaa igu oran jirtay waa inaad ka shaqaysaa sidii aad u guursan lahayd, inkastoo ay ogayd wixii isoo maray.
Qoyska aabbahay oo kunool Hindiya ayaa ii sheegay in ay ka niyad jabeen in aan guriga joogo guur la’aan, waxay la ahayd inaan sharafta uga cayaaray. Waalidkay way I taageereen 100% balse waxaan dareemay in aan anigu bahdilay.
Muddo shan sano ah waan iska gaabsaday, balse sanadkii 2013-kii ayaa bilaabay in aan raadiyo lammaane.
Marka aan dadka ka codsado in ay ii soo raadiyaan nin wanaagsan badanaa way ku farxaan in ay I caawiyaan. Waxayse bilaabaan in ay su’aalo I waydiiyaan – inta aan jiro, halka aan ku noolaan jiray, halka aan kasoo shaqeeyey – balse marka aan u sheego in la isoo furay, ayaa wajiyadoodu is baddalaan. Waxaadba mooddaa in ay leeyihiin “kuma caawin karno”
Guurkaygu waxa uu ahaa mid la ila wada doonayey. Dadku waxay I oran jireen waad sii waynaanaysaa waxayna cadaadis igu saari jireen in aan guursado. Sidaas darteed waxaan macbad kuyaal Southall ka codsan jiray in la I baro qof uun.
Markii la I furay kadib, waxaan daydayey nin cusub, waxaan tagay macbadka Hounslow si la iiga diiwaangaliyo buugga dadka guur doonka ah.
Waan ogaa in macbadku uu I barayo oo kaliya dadka aan isku dabaqadda nahay, inkastoo dabaqaddu aanay muhiim ii ahayn.
Balse waxa aanan ku baraarugsanayn ayaa ahaa, maadaama la isoo furay, in ay iga barayaan oo kaliya ragga ayana wax soo furay.
Marka qofka ka shaqeeya macbadka uu arko xogtayda iyo qoraalka aan buux buuxiyey waxa uu odhanayaa: “Waxaa la helayaa laba nin oo wax soo furay – waana kuwa kaliya ee kugu habboon.”
Hase ahaatee laba macbad oo kale ayaa ku arkay in ragga wax soo furay la isbaro dumar aan waligood soo guursan. Sidaas darteed maxaa dumarka lasoo furay naloo bari waayey rag aan waligood soo guursan? Sidaas darteed ragga furriinku saamayn kuma leh, waa dumarka oo kaliya.
Ninka masuulka ka ah adeegyada la xiriira guurka ee macbadka Hounslow ayaan waydiiyey in uu ii sharraxo arrintaas wuxuuna ii sheegay in aanu asagu talo ku lahayn – balse raggu ay doonayaan gabadh bikro ah, waalidkoodna waxayba ku yiraahdaan ma doonayno carmal ee hanoo keenina
“Ma ay ogola carmalka, mana aha wax ay sameeyaan bulshada haysta madhabta Sikh, waa haddii aan si dhab ah u rumaysannahaye,” ayuu yiri.
Hase ahaatee bulshada Sikhs way isfuraan mararka qaar. Warbixin sandkii 2018 laga soo saaray bulshada kunool Britain ee madhabta Sikh aaminsan ayaa sheegaysa in 4% kamid ah bulshadaas ay is fureen, halka 1% ay kala tageen.
Furriinku waxa uu noqday wax iska caadi ah, dhaqanku waa isbaddalayaa. Dadka dhalinyarada ah waxay I sheegeen in aanu dhib wayn ku hayn. Hase ahaatee dadkii aynigayga ahaa, xataa kuwo walaalahood ama gabdhooda lasoo furo wali waxay aaminsan yihiin in haweenay carmal ah aanay meelna kasoo galin.
Waxay dadku igu yiraahdaan: ” Waa waynaatay oo carruur ma dhali kartid, way adagtahay in aad qof cusub is barataan – waad raagtay. cid aad guursatid ma helaysid”
“Waxaan ahay 38 jir, kama waynaan in aan carruur dhalo. Waa wax kale oo aan isku qanciyo”.
Mararka qaarkood waxaan iskula hadlaa: ” Way adag tahay in qof aad guursato aad ka hesho UK, malaha waxaa fiican in aad Hindiya qof ka raadsato”.
Marka hooyaday ay ka codsato mid kamid ah asxaabteeda in uu qof kale I baro, waxa uu ugu jawaabaa sidii inaan ahay” gaadhi duqoobay”.
Bishii hore, nin ayaa waxaa I baray saaxiibtay. Waxay ahayd sheeko caan ah. Waxa uu yiri ma doonayo haweeney carmal ah. 40 jir ayuu ahaa, wuxuuna doonayey in uu guursado haweeneey aan horay loo soo guursan.
Kadib markaan isbarranay ku dhwaad 40 nin 10-kii sano ee lasoo dhaafay, dhowr bilood kahor uun baan ku fekeray in aan calaf u doonto dadka aan haysan madhabta Sikh, qaar kamid ah asxaabtayda ayaaba goor hore tallaabadaas qaaday.
Waxaan sheekadaan u tebeniyaa waxaan rajaynayaa in la iga daayo takoorka ah in aan ahay haweeney Carmal ah.
Waxaana laga yaabaa in sheekadan ay dumar badan dhiirri galiso. Haddiina ay dumarku ku dhacaan guur tacaddiyo wata ayagoo loogu hanjabbayo furriin, waxaan kula talin lahaa in ay isaga tagaan. Waxaan nahay banii aadam, waxaan mudannahay in si siman naloola dhaqmo.
Previous articleMadaxweynaha Djibouti iyo wefti uu hoggaaminayo oo gaadhay Muqdisho
Next articleSomaliland oo aqbashay lacag DP World ku kordhisay ganacsatada, hanjabaadna raacisay
Gabadhii xijaabnayd oo ka fadhiisatay xayaysiiska
Xogta Turkiga oo la soo wareegay shixnadii 2aad ee gantaalaha S-400